Izinhlelo zokusebenza ezihamba phambili zomculo (Ezamahhala nezikhokhelwayo) - i-Android ne-iOS - Izinhlelo Zokusebenza
Ukulalela umculo wakho owuthandayo ngenkathi usebenza kungakhuphula imizwa yakho nokukhiqiza futhi. Ngokushesha kukwenza wehlise umoya futhi uxoshe ukucindezeleka engqondweni yakho, futhi kuthuthukise ukugxila kwakho. Ngisho nakimi, umculo emsebenzini wami ungumngane ovelele kakhulu.
Ngakho-ke, uma nawe uthanda ukulalela umculo, nali iqoqo elihle lezinhlelo zokusebenza zamahhala ezikusiza ukuthi uthole umculo omuhle kakhulu ngesikhathi esisodwa. Ngakho-ke, ulindeni? Ake sibheke lezi zinhlelo zokusebenza zamahhala zomculo.
Manje Finyelela Umculo Ongavinjelwe kusuka ezikoleni nasemakolishi nomhlahlandlela wethu.
Uhlu Lwezinhlelo Zokusebenza Ezikhululekile Zomculo:
Lesi sikhathi ngaphambi kokuhlanganisa uhlu lwakho lomculo futhi ulalele izingoma, naka lezi zinhlelo zokusebenza zomculo zamahhala ezikusiza ukuthi usakaze umculo obukhoma. Ngakho-ke, ake siqale!
Cishe akekho umuntu manje ongakezwa ngeSpotify. Ungadlala izingoma ku-inthanethi futhi ulalele umculo owuthandayo noma kunini, noma ngabe usemsebenzini noma ejimini. Uhlelo lokusebenza lunikeza inguqulo yesivivinyo samahhala yezinsuku ezingamashumi amathathu futhi ikunikeza izingoma ezingaphezu kwezigidi ezingama-30 ezivela kubaculi abahlukahlukene emhlabeni jikelele.
Ngaphezulu kwalokhu, ungadala uhlu lwadlalwayo oluthandayo noma uhlu abantu abaningi abalukhethayo ngokuya ngemizwa yakho. Isibonelo, uma uthanda izingoma zothando, bese ushaya izingoma zothando; ngokuzenzekelayo, uzothola amathrekhi. Yize inguqulo yamahhala ingakhululekile ezikhangisweni, noma kunjalo kungaba kuhle ukuba nawo futhi ujabulele umculo wamahhala.
Bhalisela i-Spotify Student Discount
2. I-Google Play
I-Google Play isendaweni yesibili ohlwini lwezinhlelo zethu zokusebenza zamahhala zomculo. Ungalalela lapha amathrekhi omculo owathandayo wabaculi bakho bomculo obathandayo mahhala. Okuhamba phambili yiGoogle Play futhi ikuvumela ukuthi wenze ngokwezifiso ukukhetha kwakho futhi ulayishe umculo wakho futhi awunazikhangiso.
Noma ungalayisha izingoma ezingafika ku-50,000 kanye namathrekhi omculo ahlinzekwa yi-Google Play. Ngakho-ke, uma ufisa ukuba nethrekhi eyenziwe ngezifiso futhi ufuna ukuyilalela online, ungasakaza umculo noma kunini ngokuwufaka kulolu hlelo lokusebenza mahhala.
Cishe nonke senizwile ngePandora. Yebo, lolu hlelo lokusebenza lomculo lwamahhala lilingana ngokuphelele nesici somsakazo seSpotify, noma singasho izimbangi ezimbili ezinkulu kakhulu zezinhlelo zokusebenza zomculo emakethe. I-Pandora ibuye inikeze nokusakazwa komculo kwamahhala, kepha kukuvumela ukuthi ukhethe isiteshi ngokususelwa kokukhethile futhi uthole umculo omusha mahhala.
Ngokungafani neSpotify, bapheka umculo mahhala futhi futhi bane-premium version. Ungaqaphela ezinye izikhangiso eziphazamisayo kunguqulo yohlelo lokusebenza lomculo wamahhala, kepha lokho kuzolunga uma ulalela izingoma zakho ozithandayo mahhala.
4. Umculo we-Amazon
Olunye uhlelo lokusebenza oludumile olukuvumela ukuthi ulalele umculo mahhala yi-Amazon. Ngokufana ne-Google Play, lolu hlelo lokusebenza futhi likunikeza ukufinyelela kokukala ukukhetha kwakho nokuhlanganisa uhlu ngokubheka izingoma ozithola kakhulu kuma-albhamu nakuhlu lwabaculi.
Ngaphezu kwalokho, ikunikeza ukufinyelela kokulayisha cishe izingoma ezingama-250 futhi uzivumelanise kumadivayisi wakho. Ngaphandle kwalokho, uhlelo lokusebenza lomculo lutholakala kalula, lune-interface ehloniphekile, futhi lusebenza kumadivayisi ahlukahlukene kahle.
Bhalisela i-Prime Music Student Discount
5. Umsakazo weSlacker
Okuzayo ngokulandelayo ohlwini lwezinhlelo zokusebenza zomculo zamahhala yiSlacker Radio. Lolu hlelo lokusebenza lomculo lwamahhala likuvumela ukuthi ukhethe uhlobo lomculo olufanele oluthandayo futhi likuvumela futhi ukuthi ulalele iziteshi zomsakazo zangaphambi kwezinhlelo.
Ungakha uhlu lwakho lokudlalwayo lomculo, ukhethe iziteshi zomsakazo, futhi ugcine ithrekhi yakho yengoma oyithandayo ngaphezulu kohlu ukuyidlala emuva.
Yize i-SoundCloud iyi-app yomculo yamahhala, inomqondo oyingqayizivele njengoba ifana nenethiwekhi yomphakathi yomculo. Ama-DJ nabathandi bomculo bangalayisha umculo wabo wokuqala, ama-podcast, nezingoma lapha mahhala.
Ngaphezu kwalokho, ungenza ngezifiso uhlu lwakho lomculo futhi.
7. Ikusasa FM
I-Future FM wuhlelo lokusebenza lomculo lwamahhala. Lokhu kukunika ipulatifomu yokusakaza izingxube ze-DJ ezivela kuma-nightclub, amasethi abukhoma, amakhonsathi, nomculo womkhosi. Umqondo woqobo wokwethula lolu hlelo lokusebenza ukushicilela okuqukethwe kwe-DJ kusuka ko-DJ abadume umhlaba wonke.
Kepha manje ime njengenye insiza yomculo yamahhala evelele kuphakethe futhi ikunikeze umuzwa womculo oyingqayizivele. Noma kunjalo, kungahle kungabi uhlelo lokusebenza lomculo olufanele kuwo wonke amahhovisi, kepha luzodlala ithrekhi yomculo ethokozisayo ngesikhathi sakho samahhala.
I-TuneIn olunye uhlelo lokusebenza lomculo lwamahhala ongaluthola futhi ulalele izingoma eziteshini zomsakazo zendawo. Ngaphezu kwalokho, ikunikeza inketho yokulondoloza, okuyisici esihlaba umxhwele kakhulu salolu hlelo lokusebenza. Usebenzisa lesi sici, ungagcina umculo wokugcina owulalelayo ukuze uwuthole ngokuzayo.
Ngaphandle kwalokhu, ungafaka futhi ingoma, igama lomculi, noma uhlobo bese uthole lonke uhlu lwazo zonke iziteshi zomsakazo lapho ingoma ingadlalwa khona.
Lolu hlelo lokusebenza lomculo lwamahhala lunokuxhumana okuqondile okukuvumela ukuthi udale uhlu lwakho lokudlalwayo kusuka kuthrekhi ye-SoundCloud, amavidiyo we-YouTube. Ungasesha ngokushesha umculo ngohlobo futhi ulalele izingoma ezihamba phambili. Yize kunguhlobo olusekelwa yizikhangiso, likuvumela ukuthi udale uhlu lwamaculo angenamkhawulo ukulalela amathrekhi akho owathandayo.
Mhlawumbe ama-9tracks wuhlelo lokusebenza lomsakazo lwamahhala, kepha likuvumela ukuthi ulalele izingxube ezixutshiwe ezingenazikhangiso zezingoma. Ungathola lapha amamiksi athrendayo, izingoma ezidumile, ukukhetha kwabasebenzi, nokunye okuningi.
Ngaphezu kwalokho, ungagcina iso lakho lidlala izingoma zakho ozithandayo ngokusesha ingoma, uhlobo, umculi, futhi-ke, nemizwa yakho.
11. Q Umculo App
I-Q ingenye yezinhlelo zokusebenza ezihamba phambili zokwabelana ngomculo ezikuvumela ukuthi usethe umculo wakho we- 'Q' kusuka ku-YouTube naku-Spotify. Ngaphezu kwalokho, ungasebenzisana nohlu lwakho lwadlalwayo nabantu osebenza nabo nabangane.
Kuyindlela enhle yokuvumela wonke umuntu ajabulele umculo wakhe awuthandayo.
Ngakho-ke, ngithemba ukuthi uluthokozele uhlu lwethu oluphezulu lwezinhlelo zokusebenza zamahhala zomculo. Ngokuzayo, noma nini lapho iqembu lakho likushaya kusukela kusilima emini, khuphula amandla ngokulalela amathrekhi akho omculo owathandayo kulezi zinhlelo zokusebenza zomculo zamahhala.